Tag: isiokwu akara | Martech Zone
Tag: isiokwu akara
O mere ọzọ. Mgbe m na-enyocha ndepụta (enweghị ike igbochi) nke ozi ịntanetị ndị na-akụ igbe mbata m, achọpụtara m ozi nzaghachi. Isi okwu, n'ezie, malitere site na RE: ya mere o jidere anya m ma meghee ya ozugbo. Ma ọ bụghị azịza. Ọ bụ onye na-ere ahịa chere na ha ga-abawanye ọnụego emeghe site na ịgha ụgha niile nke ndị debanyere aha ha. Ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ oghere ha, ha tụfuru atụmanya na
Ozi ịntanetị gị dị ka nke a: Ikekwe otu isiokwu dị mkpa ma bụrụ nke ahaziri iche karịa "ChangeThis: Nkebi nke 46" Ikekwe ụfọdụ akara na - agbaji ka m ghara kechie ka m gụrụ (agụghị m ya, ọ gaghị ekwe omume) . Ikekwe ọtụtụ akụkụ mime ozi ịntanetị iji zipu ederede na ndị chọrọ larịị anya, ma HTML ndị nke anyị bụ ndị na-enwe a-ọma e mere email. Ikekwe okwu mmeghe? Ikekwe ụfọdụ na-acha ọcha ohere n'etiti isiokwu na-